Kubafundi nabazali Ukukhetha iSikolo soShishino
Kutheni ukuhlanganiswa kwamatyala akulungele wonke umntu
Yintoni Ukuhlanganiswa Kwamatyala?
Ukuhlanganiswa kwamatyala ngokukodwa kulungiselelwe ityala elingakhuselekanga (oko kukuthi ityala elingagcinwanga yixabiso). Xa udibanisa amatyala akho, uthabatha imali mboleko ukuhlawula amanye amatyala. Oku kukuvumela ukuba udibanise imali oyibole ngayo kwinkokhelo enye.
Iinkqubo zokuQiniswa kweMatyala
Kukho izizathu ezininzi zokuba abantu baqwalasela ukuhlanganiswa kwetyala. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqonda ukuba akukho nto ilula xa ifika kwityala.
Ezinye zeenzuzo ezinkulu zokuhlanganiswa kwetyala ziquka:
Imboleko yemali yokuhlanganiswa kwetyala inokubakhokelela ukuba unemivuzo emininzi. Mhlawumbi ugijime amakhadi akho ekweretyana ngelixa usesikolweni, okanye unenani leemali-mboleko zentengo ephezulu (inkokhelo yabafundi, imboleko yemoto, njl.) Imboleko yokuxhaswa kwetyala iya kukuvumela ukuba uqokelele zonke ezi ntlawulo enye ntlawulo.
Ukuba unexesha elilula ukwenza iintlawulo zakho, unokukwazi ukukhusela iifizi zokugqibela, iintlawulo ezongezelelweyo, kunye nekhredithi engalunganga eyobangela ukuba ungeke ukwazi ukuhlawula iindleko eziqhelekileyo.
Kungenzeka ukuba ufumane inzala engaphantsi kwintengo yemali-mboleko-okanye ubuncinci isantya esingaphantsi kweerhafu zangoku ohlawula ityala lakho.
Umxhelo woLungiso lweMatyala
Kwabanye abantu, ukuhlanganiswa kwamatyala akunakho ukuphendula. Enyanisweni, kunokuyenza ingozi ngakumbi kwiimeko zakho zemali. Kufuneka uqwalasele zonke iingxaki zokuhlanganiswa kwetyala ngaphambi kokwenza naziphi na izigqibo.
Ezinye zeengxaki eziqhelekileyo ziquka:
Ukuhlanganiswa kwamatyala akunciphisi ityala, ngoko imali-mboleko yokuhlanganiswa kwetyala ayikwazi ukwenza nantoni na ukunceda imeko yakho yezemali.
Kunokuba nzima kunzima ukufumana ixabiso lentlalo elungileyo kwimali-mboleko yokuhlanganiswa kwetyala. Ukuba isantya kwimboleko yakho entsha ayikho na engcono kunesilinganiso ohlawula ngayo esikolweni sakho samanje, ukuhlanganiswa kwemali-mboleko yakho okanye ityala lekhadi lekhredithi aliyi kuqonda.
Ukuhlanganiswa kwetyala kungenza iindleko zibe zibiza kakhulu kwaye zithatha ixesha elide ukuba zihlawule. Khumbula, xa udibanisa amatyala, usagqiba ukuhlawula imali efanayo. Uhlobo oluphambili ngokuqhelekileyo lide ubude bekota. Ixesha elide lithetha nje ukuba ugqiba ukuhlawula imali emininzi ngentshiseko. Sebenzisa le-calculator consolidation calculator kwi-Bankrate ukuze unqande amanani.
Ukuba usebenza nekampani yokuhlanganiswa kwetyala, awuyi kuthatha imali-mboleko - ubapha imali nganye ngenyanga kwaye bakhokhela ababolekisi bakho. Iinkampani zokuhlanganiswa kwezikweletu ziseshishini lokwenza imali - kwaye ezinye zazo ziyi-scammers-ngoko kufuneka uqaphele malunga nabani oqeshisayo ukukunceda ngetyala lakho.
Ngaba UnokuQinisekisa amatyala?
Ukuhlanganiswa kwamatyala akusiyo isisombululo esiphezulu kubo bonke abantu. Kuxhomekeke nje kwiimeko zakho zezimali zangoku. Ukuba uzama ukugqiba ukuba ngaba ukuhlanganiswa kwamatyala kungakunceda ukuba ulondoloze imali, kufuneka uqhagamshelane neengcali zezemali ezingakunceda ukuba unqande amanani. Ungaphinda ufune ukuqwalasela iingcebiso ngekhredithi evela kwintlangano engenzi nzuzo njengeSizwe soMcebisi weNgcebiso ngeMali.
Iimfundiso zeBhayibhile zeeNgcwabo kunye novelwano
Uninzi oluphumeleleyo lweMMA Fighters-Abaguquleli be-Movie-Turned